Feysal Cali Waraabe oo si aan caadi ahayn dhulka ugu jiiday Xasan Sheekh Maxamuud (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Feysal Cali Waraabe oo si aan caadi ahayn dhulka ugu jiiday Xasan Sheekh Maxamuud (DHAGEYSO)
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ee Somaliland Injineer Feysal Cali Waraabe ayaa maanta si aan caadi ahayn dhulka ugu jiiday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoona dhinaca kale ka hadlay tartanka doorashada madaxweynaha ee dhawaan ka dhici doonto dalka Soomaaliya.
Injineer Feysal Cali Waraabe oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland ayaa sheegay in afartii sano ee lasoo dhaafay uu Xasan Sheekh dalka madaxweynaha ka ahaa uu ku kacay falal musuq-maasuq iyo wax isdaba marin ah.
“Afartii sano ee lasoo dhaafay Xasan Sheekh wuxuu dalka ku haayay musuq-maasuq iyo wax isdaba marin, wuxuu kala jar-jaray Soomaaliya oo dhan, wuxuu u kala qeybiyay 5 dowladood, ma ahan qof aan dhihi karo waa shaqsi dan iyo xaajo ka leh Soomaaliya, Xasanoow waxaan ku leeyahay haku riyoon weligaa in Somaliland iyo Soomaaliya ay midoobaan” Sidaas waxaa yiri Injineer Feysal Cali Waraabe.
Dhinaca kale, Injineer Feysal Cali Waraabe ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay haatan u baahan tahay hogaan daacad ah oo ka bixin kara dhibaatada ku habsatay, wuxuuna sidoo kale carabka ku dhuftay in hadii laheli lahaa hogaan daacad ah oo dhibta Soomaalida ka bixin kara aanay Soomaaliya sidatan ahaateen.
Ugu dambeyntii, Injineer Feysal Cali Waraabe ayaa baaq u diray xildhibaanada dhiibanaya codka doorashada madaxweynaha Soomaaliya, isagoona ugu baaqay inay Ilaahay ka baqaan islamarkaana ay codkooda siiyaan qof waxtar leh, oo Somaliland madax-banaanideeda aqoonsanaya.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ee Somaliland Injineer Feysal Cali Waraabe ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaan la qorsheeynayo in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana ay soo baxayaan in doorashadaasi la musuq-maasuqo ama wax isdaba-marin lagu sameeyo.